Imisebe ihlangana kanjani? - Mytika Speak
Ikhaya / Ama-Rays / Imisebe ihlangana kanjani nomunye nomunye?
Ama-Rays hlangana nomunye nomunye njengezelamani ezincintisanayo ezidlala i- game. Zonke zivela eMthonjeni owodwa kodwa zinezinto ezihlukile ezibajabulisayo.
Ngezinye izikhathi, bangancintisana ngokwedlulele njengoba bebeka injabulo yabo komunye nomunye. Abazi ukuthi bangaletha usizi esikhundleni ngoba injabulo komunye kungaba usizi komunye.
Isibonelo, u-Adalee ungumculi oneminyaka engama-28 ubudala one-green core ray. Uthanda ukudlala ezindaweni ezincane. Lapho ecula, uyezwa umculo bese elungisa izwi lakhe ukuveza imizwa ayizwayo. Ngolunye usuku, ngemuva kokuphuma kwakhe esiteji, uPalmer uthintana naye onguphrojusa womkhakha wezomculo one-orange core ray. UPalmer uchazela u-Adalee ukuthi unethalente langempela futhi konke akudingayo ukulungisa izinhlobo zezingoma aziculayo ukuze zihambisane nalokho iningi elifuna ukukuzwa. U-Adalee uthatha isinqumo sokuzama bese evumela uPalmer ukuba amyalele ukukhetha kwakhe ingoma. Njengoba ethembisile, uqala ukunakwa kakhulu futhi aziwe kakhulu endimeni yomculo. Ukudlula konyaka uPalmer umnikeza inkontileka yokuqopha. Ngaphambi kokusayina, u-Adalee uthatha ikhefu lempelasonto ukucabanga ngempilo yakhe. Uyabona ukuthi akaseneme njengakuqala yize ayephumelele. Uyabonga ngokuthi wenza imali ngokwenza lokho akuthandayo kepha uzizwa sengathi ulahlekelwe ukuxhumana kwakhe ngokomzwelo nomculo ngenkathi ecula. Kwabanye abantu, kungaba yisifiso sokuthandwa yibo okubenza bafune ukuba sesiteji kepha ku-Adalee bekulokhu kuyisipiliyoni phakathi kwakhe nomculo. U-Adalee unquma ukungayisayini inkontileka ngaphandle kwalapho evunyelwe ukwenza uhlobo lomculo aluthandayo.
Imisebe ngokungazi ithatha indima yothisha oletha izifundo. Lezi zifundo zisebenza ngenhloso enkulu yokusizana ukubona nokwamukela umnyombo wazo.
Iningi lalezi zifundo liza ngezilingo, izinkinga, kanye iziphazamiso kepha baletha nolwazi nokwamukelwa.
Sisebenzisana nemisebe ehlukahlukene nsuku zonke. Okwamanje iningi lethu liyinhlanganisela yale misebe, eholwa yi-main ray ray. Iqiniso lokuthi siyakwazi ukubona neminye imisebe, lenza kube lula ukuzwana.
Amathegiukuncintisana ukuqonda Ugqozi ukuxhumana imisebe izingane zakubo ingokomoya